ကောင်းကင်ဖြူ: ကားဆေးအရောင်းများ နှင့် ကားဆေးများအကြောင်း
မင်္ဂလာပါဗျာ … ။ ဒီနေ့အလုပ်နားရက်လေးမို့ကားဆေးရောင် နှင့် ကားဆေးအမျိုးစားများ အကြောင်းကို သိသလောက်လေး ပြောပြပါမယ် ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိသမျှ ကားတွေ ရဲ့ အရောင် များကို world’s most popular car color မှ စစ်တမ်း ကောက်ယူ ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းအရ ….
2. Black – 24 percent
4. Gray – 16 percent
10. Others – < 1 percent ….. ရှိတယ်လို့သိရပါတယ် … ။
Silver အရောင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိသမျှ ကားတွေရဲ့ ၂၆% ရှိပါတယ် ။ ငွေမှင်ရောင် အကြောင်းကို ကျနော် ရေးခဲ့ဘူးတယ် ဒီအရောင်ရဲ့ အဓိက အာသားချက်က တော့ အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည် ရှိခြင်း ပါပဲ ။
Black ကတော့ ကျနော်တို့အာရှနိုင်ငံတွေ မှာ အသုံးနည်း ပင်မဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ရှိတဲ့ ကားတွေရဲ့ ၂၇% ဟာ Black အရောင် ရှိတယ် လို့မှတ်သားဘူးပါတယ် ။ ဒီအရောင်ရဲ့ အဓိက အားသာ ချက်ကတော့ တောက်ပ မှု့အကောင်းဆုံး ပါပဲ … ။
နောက်တစ်ခု က အဖြူရောင် ပါ ။ အာရှနိုင်ငံတွေ မှာ အများဆုံးတွေ့ ရတဲ့ ရောင်လို့သိရပါတယ် ။ အဓိက အားသာချက်ကတော့ Silver ပြီးရင် အပူဒဏ် ကို ခံနိုင်ရည် အရှိဆုံးက အဖြူ ရောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုလို အရောင် အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ ကားဆေး တွေကိုတော့ အခြေခံအားဖြင့် နှစ်မျိုးသာ ခွဲထားပါတယ် ။ ဒါကတော့ Metallic နဲ့non – Metallic ဆိုပြီ နှစ်မျိုး ပဲ ခွဲ ထားပါတယ် ။
ကားဆေး တွေ မှာ Metallic ဆေး ဆိုတာကို လူသိများပါတယ် ။ တချို့ က polychromatic လို့ ခေါ်ကြသလို ၊ ကျနော် ထိုင်းမှာ လုပ်ခဲ့ တုန်းက metal flake လို့ ခေါ်ကြတာလည်း တွေ့ ခဲ့ဘူးပါတယ် ။
Metallic ဆေးရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ small metal flakes လို့ ခေါ်တဲ့ အမှုံ များပါဝင်ပြီး ဆေးအရောင်ကို sparkling effect တောက်ပမှု ဖြစ်စေပါတယ် ။ ယနေ့အသုံးပြုနေတဲ့ အိမ်စီးကား တော်တော် များများ မှာ Metallic ဆေးကို အသုံးကြပါတယ် ။
ယနေ့အချိန်မှာ Metallic ကားဆေး အမျိုးစာ များစွာရှိပါတယ် ။ ကားထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီ တွေ အနေနှင့် မိမိကားရဲ့ ဆေးအရည်သွေးကို တုပလို့မရအောင် မိမိထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Metallic ကားဆေးကို အပို ပစ္စည်းအနေ နဲ့မရောင်းကြပါဘူး ။ ကားဆေး ထုတ်လုပ်တဲ့ သူတွေကတော့ မှုရင်းကို ပဲ တုပ ပြီး ဈေးကွက် တင်ကြတာများပါတယ် ။ အဲ့လို အမျိုးမျိုး ရှိတဲ့ Metallic ဆေး အမျိုးစာကို ခွဲခြား ရာမှတော့ Metallic 2K အမျိုးစားနဲ့Metallic 1K ဆိုပြီး နှစ်မျိုး ပဲ ရှိပါတယ် ။
Metallic 2K ကိုတော့ ယနေ့အသုံပြုနေတဲ့ Metallic ဆေးမှာ အများဆုံးအသုံးပြု တာတွေ့ ရပါတယ် ။ အသုံးပြုရာမှာ အခြေခံအားဖြင့် undercoat ၊ basecoat ၊ clearcoat ဆိုပြီး သုံးဆင့် ရှိသလို midcoat ဆိုပြီ လေးဆင့် အသုံးပြု တာလည်းရှိပါတယ် ။ ၊ basecoat နဲ့clearcoat ကြားမှာ colour effect ဆိုတာ ထည့်သုံးလို့ရသလို clearcoat ကိုလည်း မိမိ စိတ်ကြိုက် modified လုပ်လို့ ရပါတယ် ။ ယနေ့အသုံးပြုနေတဲ့ ကားဆေး အမျိုးစားတွေ ထဲမှာ တော့ Metallic 2K ဆေးအမျိူး ဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ။
Metallic 2K ရဲ့ အားသာချက် ကတော့ colour effect အသုံးပြု နိုင်ခြင်းကြောင့် ဆေးရောင်ကို ကြာရည်ခံနိုင် ရည် ရှိစေပြီ ၊ အတောက်ပဆုံး ဆေးရောင် ကို ရရှိစေပါတယ် ။ အားနည်းချက်ကတော့ ဆေးရောစပ် မှု့လွဲသွားတာနဲ့ဆေးအရောင် ပါ လွဲသွားတက်ပါတယ် ။
Metallic 1K ဆိုတာကတော့ Metallic 2K ဆေးမှုတ် ရာမှာ undercoat ၊ basecoat ၊ clearcoat ဆိုပြီ သုံးဆင့် ရှိပင်မဲ့ ။ Metallic 1K ကတော့ undercoat နဲ့colourcoat ဆိုပြီ နှစ်ဆင့်ပဲ ရှိပါတယ် … ။ ရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့ Metallic 1K ဟာ basecoat နဲ့clearcoat ရောစပ်ပြီးသာ လို့ ပြောလို့ ရပါတယ် ။ Metallic 1K ရဲ့ အားသာ ချက်ကတော့ basecoat နဲ့clearcoat ကို ရောစပ်ပြီးသာ ဖြစ်တာကြောင့် ဆေးအရောင် လွဲသွားတာမျိုး လုံးဝ မရှိပါဘူး ။ အားနည်း ချက်ကတော့ basecoat နဲ့clearcoat ရောစပ်ထားတာကြောင့် basecoat နဲ့clearcoat ကြားမှာ အသုံးပြုရသော colour effect အသုံးပြုလို့မရ တော့ပါဘူး ။ တစ်နည်းပြောရရင် ဆေးသေ အမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် ။
ကားဈေးကွက်ထဲမှာ တော့ Metallic 2K နဲ့Metallic 1K ကို တစ်ခါတလေ အလွယ်တကူခွဲခြားမရလို့အငြင်းပွာ ဖွယ်ရာဖြစ်တက်ပါတယ် ။ အများအားဖြင့် Metallic 2K ဟာ Metallic 1K ထက် တန်ဖိုးရော အရည်သွေးပါ ကောင်းမွန်တယ် ဆိုပင်မဲ့ တချို့Metallic 1K အမျိုးစာတွေဟာ Metallic 2K နဲ့ ခွဲမရအောင် အရည်သွေးကောင်းမွန် တာရှိပါတယ် ။ Metallic 2K နဲ့Metallic 1K ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ခွဲခြားမယ် ဆိုရင်တော့ colour effect ကို ကြည့်ကြပါတယ် ။ colour effect ပါရင် Metallic 2K မပါရင်တော့ Metallic 1K ပေါ့ …. ။ ဒါပင်မဲ့ ယခုနှစ်ပိုင်း မှာ colour effect ပါတဲ့ Metallic 1K ဆေး အသစ်ထွက်ရှိ နေပါတယ် ။
non – Metallic ဆေးအသုံးထားတဲ့ ကား
non – Metallic ဆေး
non – Metallic ဆိုတာက small metal flakes ဆိုတဲ့ အမှုံ မပါတဲ့ ရိုးရိုးဆေးပါ ။ မြန်မာပြည် မှာ တော့ ပေါင်းဆေး လို့ခေါ်ကြပါတယ် ။ ဆေးသေ အမျိုးစာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အသုံးပြုရာမှာ undercoat နဲ့colourcoat ဆိုပြီး နှစ် ဆင့်ပဲ ရှိပါတယ် ။ တန်ဖိုးနည်းသလို ပျက်စီလွယ် ပါတက်ပါ ။ အဓိက အားနည်းချက်ကတော့ တောက်ပမှု ကိုကြာရည် မခံနိုင်ခြင်းပါပဲ ။ အရည်သွေးကောင်းတဲ့ non – Metallic ဆေးတောင် တောက်ပမှု ကြာရည်မခံ တာတွေ ရပါတယ် ။ အများစုတော့ လုပ်ငန်းသုံးကားတွေ မှာပဲ အသုံးပြု ပင်မဲ့ တချို့ အိမ်စီး တရုတ်ကားတွေ မှာ အသုံးပြု တက်ပါတယ် ။
non – Metallic ဆေးဟာ ဆေးမှုတ်ပြီး တစ်လ လောက်ထိ တောက်ပမှု ကောင်းကောင်းရှိနေတာကြောင့် ကားဈေးကွက်ထဲမှာ တခါတစ်လေ Metallic 1K နဲ့အငြင်းပွား ဖွယ်ရာ ဖြစ်တက်ပါတယ် ။ လွယ်လွယ်ကူကူ ခွဲခြားမယ်ဆိုရင် ဆေးအရောင်မှာ small metal flakes ဆိုတာ မပါပဲ တောက်ပ နေမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ non – Metallic ဆေးပဲပါပဲ ….. ။
(ဓာတ်ပုံများကို google မှ ရယူခဲ့ပါသည် )
Posted by မောင်ဘုန်း at 5:14 AM
AH May 27, 2012 at 5:38 AM
ကျေးဇူးပါဗျာ.. ဆေးအကြောင်း တော်တော်သိသွားပြီ။
စံပယ်ချို May 27, 2012 at 6:03 AM
မောင်ဘုန်းရေ အားလုံးကိုနားမလည်လဲ ဗဟုသုတတော့ရလိုက်တယ်
ချစ်စံအိမ် May 27, 2012 at 6:56 AM
မောင်ဘုန်းရေ အမကတော့ ပန်ရောင်ကြိုက်တော့ ဘာမဆိုပန်ရောင်ပဲ
မနေ့ကတောင် မြို့ ထဲသွားရင်းကားပန်ရောင်လေးတွေ့ လို့ငေးရသေးတယ်..
mstint May 27, 2012 at 6:50 PM
သေသေချာချာလေးကို လေ့လားထားပါလား မောင်ဘုန်းရေ။
ဗဟုသုတလေးတွေ ဖတ် မှတ်သွားတယ်နော်။ ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ပါအုံး။